Ny lalan'ny revolisiona ara-teknolojia vaovao | safidy
ny Helmut Melzer 30. Desambra 2015, 11: 31 11.3k Views
"Samy nieritreritra ny rehetra fa ny solosaina ao an-trano dia tena mahasalama, fa ho an'ny freaks tena izy ihany. Tsara ny 20 taona nieritreritra izany.Nanao manao toy izany koa ilay mpanonta 3D. Tsy misy olona manao pirinty voa vaovao eo amin'ny latabatra an-dakozia. Saingy tsy midika izany fa tsy azo atao izany. "- 2009 dia lehiben'ny mpanamory filoham-pirenena Michael Curry tao amin'ny makerbot Industries, fanombohana te-hanova an'izao tontolo izao. Ny hevitra manan-tsaina momba ny mpanorina Bre Pettis, Zach Hoeken ary Adam Mayer: "mitondra fitaovana izay manana refy fantsom-batana ary tsy misy vidiny ao amin'ny latabatra izahay." Raha tokony ho 200.000 dolara, ny milina kely dia tokony handany vola 200 dolara ihany.
Miaraka amin'ny fanamafisana ny efa noforonin'i Chuck Hull (3D Systems), fa indrindra amin'ny fampiasana indostrialy 3D, dia te-hanaraka ny dian'ny Steve Jobs ianao. Nanao toy izany koa tamin'i Apple izy, namadika ny solosaina mainframe tamin'ny alàlan'ny informatika kely. Ankehitriny, ny CEO CEO Makerbot Bre Pettis dia te-ho lasa mpampianatra vaovao amin'ny vanim-potoana dizitaly. Tsy niasa izany: tao anatin'izany fotoana izany, izy sy ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia saika very asa avokoa. Stratasys, orinasa izay manao ny pirinty 3D indostria lehibe, dia nividy an'i Makerbot fotsiny - rehefa avy nandoa vola 604 mitentina dolara mitentina.
Etsy ankilany, i Max Lobovsky, izay niara-niasa tamin'i mpiara-miasa tamin'i David Cranor sy Natan Linder ao amin'ny lampihazo fantsom-pifandraisana lehibe indrindra manerantany, Kickstarter, dia manana asa mahomby. Tao anatin'ny andro 2011 fotsiny dia nanangona vola mitentina 30 tapitrisa dolara ambony ry zareo Formlabs mba hamolavola mpanonta 2,9D efa mandroso. Saingy manana ahiahy hafa i Lobovsky amin'izao fotoana izao: 3D Systems, ilay tena namorona ny pirinty 3D, dia miatrika fanitsakitsahana ny sasany amin'ny patiny 3.
INFO: fanontana 3D
Ny mpamorona ny 3D fanontana dia US-American Chuck Hull ao amin'ny orinasa 3D Systems, izay efa nisoratra ny 1986 patanty voalohany.
Ny fanovana ny teknolojia 3D mpanonta teknolojia dia miasa toy izao: Modely nomerika alefa amin'ny mpanonta 3D, izay mamorona takelaka misy tsipika. Ny tsy fitoviana dia tsy maintsy atao eo anelanelan'ny fomba maro: Fodinam-bokatra Fused Deposition, ohatra, dia mitondra tavoahangy plastika feno rano. Ny stereolithograma matotra kokoa dia manisy reni-by na metaly mampiasa lasera. Tamin'ny fomba fanontana 3D teo aloha, ny akora manokana ihany no ampiasaina, Hewlett-Packard dia natolony tamin'ny faran'ny volana Oktobra ny 2014 mpanonta 3D, izay ampiarahana ireo fitaovana isan-karazany.
Ny mpanonta printy 3 dia efa sedrana ihany koa amin'ny famokarana sakafo: 2014 te-hanana ny fanombohana "Machines voajanahary" amin'ny alàlan'ny vovom-pifamoivoizana Kickstarter 100.000 Dollar ho an'ny famokarana Foodini. Ny fitaovana dia tokony ho afaka mamorona lovia isan-karazany, avy amin'ny ravioli feno ho an'ny mpamaky sy pisa, raha manome anjara sakafo mahasalama. Na dia dolara 80.000 monja aza no niara-nivory, ny mpanao pirinty sakafo dia tsy maintsy ho tonga eny an-tsena amin'ity taona ity.
Ny tena fanamarihana dia ny pirinty 3D nosoratan'i Cody Wilson anarkista izay namokatra ny 2014's Liberator, ny basy vita pirinty voalohany, ary nanandrana izany tamin'ny fakantsary. Amin'ny toerana maro, dia voararan'ny fanontana ny fitaovam-piadiana ao amin'ny mpanonta 3D. Fampiharana mahafinaritra kokoa dia ahitana ny famokarana bretsa tanana sy tongotra miaraka amin'ny vidin'ny fitaovana vitsivitsy Euros.
Na izany aza, mbola mitohy ny revolisiona teknolojia. Tsy miaraka amin'ny bitika nomerika intsony izy fa miaraka aminy. Ny replicator avy amin'ny andian-tsarimihetsika Star Trek SciFi dia ohatra tsara ho an'ny mpanonta 3D: mamela ny hamorona zavatra rehetra voarakitra na namboarina teo amin'ny firafitry ny atiny. Mazava ho azy fa tsy lavitra izany ny revolisiona teknolojia, fa ny mpanonta 3D dia efa afaka manatanteraka zavatra tsy takatry ny saina: mamokatra faritra ho an'ny fiara sy ny avotra, ny prostheses, ny basy feno ary ny taova.
Vokatry ny fivoaran'ny teknolojia manaraka
Ankoatra ny olana etika, tsy vitan'ny voka-dresaka ny vokatry ny fanaovana pirinty 3D. Raha ny tena manokana dia mety hiova tanteraka ny rafitra ara-toekarena. Fiantsenana? Ahoana for? Angamba ao anatin'ny folo taona dia hivoaka an-trano ny zava-drehetra - miaraka amin'ny voka-dratsy mahatsiravina ho an'ny mpanamboatra, ny mpanongotra ary ny sehatra hafa an'ny toekarena. Fa angamba ny fampandrosoana ity dia dingana iray mankany amin'ny ekolojia? Izany koa dia mety hitondra ny ho avy: tsy misy vokatra tafahoatra, fa ny zavatra rehetra mitaky, dia midika koa ny fandaniam-bola ary mety hampihena ny lalana fitaterana.
"3D mpanonta dia hampiasaina amin'ny ankapobeny ho" hubs "amin'ny ho avy. Ka ho ivon-toeram-panatanjahantena vaovao ankehitriny, izay hihaonan'ny mpamorona sy mpamokatra. Ny avo dia avo ka tsy maharesy ny tsindry 3D any amin'ny tontolo tsy miankina, fa amin'ny fifanaraham-paritra-eo an-toerana ", hoy i Harry Gatterer avy ao amin'ny Zukunftsinstitut. "Amin'ny ambaratonga maro, mitombina izany rehefa azo ny angovo sy ny loharanon-karena ary ny vidin'ny avara-pianarana no voaloa. Io dia mamindra ny orinasam-pifandraisana avy amin'ny maro mamokatra ho amin'ny famolavolana. Na eo aza izany, ny fomba fanao mahazatra dia miorina hatrany amin'ny toerana maro satria tsy ny famokarana rehetra dia azo adika amin'ny fomba 3D. Mahafinaritra ny fifandanjana. "
Faranan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra
Nefa aoka isika tsy hieritreritra lavitra amin'ny ho avy, efa misy izany. Ny fanovana ny teknolojia, ohatra, dia ny famolavolana fomba fisaintsainana efa maty efa ela. Epub, Mp3, Avi sy ireo endrika nomerika, mozika ary sarimihetsika hafa dia efa mamarana ny fitrandrahana ny zon'ny fananana ara-tsaina mahazatra. Keywords: Flatrate. Miaraka amin'ireo mpanome tolotra toa an'i Netflix, Spotify & Co ny fahitalavitra fandaharana fahitalavitra sy radio dia manohintohina haingana. Ny ho avy dia antsoina hoe fanjifana mandra-miteteo, aiza sy izay tiako - ary ara-dalàna tanteraka amin'ny vidin'ny volana isam-bolana.
Na i Ari Reichental, Tale Jeneralin'ny 3D Systems, izay manohintohina ireo fitakiana fanitsakitsahana pataloha nataon'ny 3D fanontana Formlabs, dia nilaza hoe: "Ny ankamaroan'ny orinasa sy fikambanana dia voalamina mba hiarovana sy hiaro ny fananany ara-tsaina. Tsy tafakatra eo intsony io. Efa lany andro ny lalàna momba ny patanty sy ny zon'ny mpamorona. Izy ireo dia manery ny orinasa hiasa schizophrenically. Mila manao zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny fahitantsika isika. "
Revolisiona teknolojia VR: Atsaharo ny fampiasana ny fitaovana akora?
Fampivoarana lehibe iray koa dia ny solomaso VR (Virtual Reality), izay miparitaka amin'ny tontolo digital izy io - amin'ny 3D sy ny kalitaon'ny sinema miaraka amin'ireo sensor izay manitsy ny fitarihan'ny sarin'ny lohany. Ny fanombohan'ny Oculus Rift - 2014 nividy manodidina ny 400 tapitrisa ary 1,6 lavitrisa dolara amin'ny anjaran'ny Facebook - dia efa hiditra amin'ny tsenan'ny modely voalohany. Na dia natao voalohany indrindra ho an'ny mpilalao amin'ny solosaina sy teatra an-trano aza izany voalohany, fa afaka nahatonga ny hitsambikina tao anatin'ny "revolisiona virtoaly". Alao sary an-tsaina izany: Ny fitaovana tampoka toy ny telefaona finday tsy tokony hatao lafo vidy, fa saika miasa toy ny teo aloha. Io dia tsy miteraka ireo zavatra tsy azo eritreretina teo aloha, fa afaka mampihena be koa ny zavatra ilaina amin'ny akora sy ny ara-materialy manerantany. Ho an'ny fananganana birao, raha ny birao nomerika no tsara tarehy kokoa sy ny mpiara-miasa mipetraka eo anilany? Manandrana amin'ny boutique? Ny tena virtoaly dia mampiseho na mifanaraka amin'ny Internet an-tserasera izany - tsy mandao ny trano. Na izany aza, i Hatterer ao amin'ny Zukunftsinstitut dia misalasala: "Araka ny fandinihanay dia hijanona lohahevitra niche ny fitaratra VR. Na dia manam-pahaizana be tokoa izy amin'ny nise maro ary tena manome lanja fanampiny. Betsaka ny tohan-kevitra hanoherana ny fampiharana lehibe amin'ny fiainana andavan'andro: fanitsakitsahana ny fiainana manokana sy ny fikorontanana maharitra ary noho izany (fa tsy ho lavitra) dia fiheverana voafetra ihany. "
INFO: Zava-misy virtoaly
Amin'ny ho avy, ny solomaso VR avy amin'ny Oculus Rift, ohatra, dia ahafahan'ny lalana mankany amin'ny tontolo virtoaly vaovao. Ny fitaovana dia noforonina amin'ny mety hisian'ny revolisiona ara-teknolojika nataon'ny American Palmer Luckey, izay ny "startup" Oculus Rift "2012 dia nanodidina ny 2,5 tapitrisa euros tao amin'ny sehatra Kickstarter. 2013 dia namoaka ny fitaovana fampivoarana voalohany, ny maodely andiany voalohany no andrasana amin'ny faran'ny 2015 eny an-tsena. Tsy mbola raikitra ny vidiny, ny vidin'ny mpivoatra dia lafo dolara 350 amin'izao fotoana izao.
Ny singa manapa-kevitra amin'ny rafi-piarovan-tena dia sehatra fijerena manokana ary indrindra ny mpikirakira haingana, izay ahafahana maneho sary mifanaraka amin'ny fotoana fohy aorian'ny fihetsiky ny lohany. Ny fampifangaroana gyroscope axis 3 sy ny tsimoram-pandeha haingana, ary koa fakan-tsary fanampiny dia namboarina hanome valiny haingana ny fihetsehana raha toa ny magnetometer ampiasaina mba hampifanarahana tsara ny sary. Amin'ny teny hafa, amin'ny tontolo virtoaly dia misy ny mahita ny tena toy ny zava-misy - ao amin'ny taratra 360 mari-pahaizana. Miaraka amin'ny fanapahan-kevitra HD, ny vokatra 3D ary ny fanaraha-maso ny fanamafisam-peo tena misy, misy ny fanandramana vaovao tanteraka.
Tamin'ny volana martsa, 2014 dia nanambara ny fahazoan'ny Facebook an'i Oculus VR amin'ny vidin'ny fividianana $ 400 tapitrisa dolara amin'ny vola sy ny 1,6 miliara dolara amin'ny anjaran'ny Facebook. Araka izany, ny solomaso VR dia tsy antenaina hijanona ho vokatra niche ary haingana dia azo ny fangatahana isan-karazany. Na dia ny lalao informatika sy ny teatra an-trano aza dia ho faritra voalohany amin'ny fampiharana, ny Facebook dia misy zavatra andrasana betsaka amin'ny resaka fifandraisana sy ny tambajotra sosialy.
Fanapariam-bola vaovao eo amin'ny sehatry ny angovo
Lars Thomson avy ao amin'ny Office Switzerland for Innovation and futures Research dia nanambara "fiompiana rafitra mankany amin'ireo fitaovana marani-tsaina" nandritra ny taona maro: "Voalohany indrindra, nikarakara ireo milina ireo olona, ​​tsy ho ela dia ho fomba iray hafa." Tsy ho ela dia hifanaraka ny trano sy ny serivisy fananganana hamorona rafitra feno. , ankoatr'izay, miara-miasa amin'ny programa automatique amin'ny Internet. Raha ny filazan'ny futurologist, hatramin'ny 700 olona "zavatra" dia mihazakazaka tsy misy tomika ao an-tokatrano - ny "matotra grika" dia ampahany amin'izany ihany. Ohatra: Ny rafi-pandrefesana trano dia mahita ny toeran'ny tompony any ivelany amin'ny findainy ary manamarika fa ny fodiana an-trano noho ny elanelana dia tsy mivoaka intsony. Ny rafitra dia manapa-kevitra samirery fa tsy hanomboka ny famahana.
Na izany aza, ny "talenta marani-tsaina" dia manondro tambajotram-angovo ho avy, izay mety handresy ny tsenan'ny asa rehetra: Ny olana amin'izao fotoana izao: ny angovo, indrindra ny angovo azo havaozina, dia matetika vokarina rehefa tsy misy filana lehibe. Any Danemark, ankoatr'izay, misy ny fanamoriana fiaramanidina ampiasainao izay mampiasa fiara elektrika ho toy ny rafitra fitehirizana angovo mba hitehirizana angovo amin'ny vidiny ambany sy ny vidiny mora, ary mba hahazoana izany an-tserasera rehefa miakatra ny tampony. Efa am-pisainana ankehitriny ny momba ireo fiara maimaimpoana, izay tanjona voalohany: tahiry fitahirizana angovo.
Harry Gatterer ao amin'ny Zukunftsinstitut momba ny paikady fanavaozana, dinamika fampandrosoana ary tena fanamby amin'ny ho avy.
"Ny fipoahan'ny fifandraisana nomerika dia misy antsika eo amin'ny tontolo iray izay mavesatra amin'ny faritra maro. Io fangatahana tafahoatra io dia miteraka ny fahatsapana fa "ny zava-drehetra" dia miova ary miova "haingana be". Eny, "fiovana" na fanovana aza izany. Saingy marina ihany koa fa ny fanavaozana tena tonga sy "manatsara" ny fiainan'ny olona dia mihakely hatramin'ny 60. Na manao ahoana na manao ahoana ny patanty misy, na firy ny rindranasa vaovao mipoitra eny an-tsena, ireo "haino aman-jery" marobe dia miharihary fa somary tsy dia mifanohina amintsika akory. Isika koa dia eo amin'ny fotoana tsy fahalalana ny fanavaozana vaovao, izay takatry ny rehetra.
Ny hany toe-javatra misy antsika dia miaina fiarahamonina antitra lehibe dia tokony handresy lahatra antsika fa tsy ny zava-drehetra dia afaka haingana fotsiny. Ny fiarahamonina 60 vao taona iray dia tsy afaka miasa irery amin'ny ICE. Saingy ny antitra antitra dia mety ho lasa fiaraha-monina hendry kokoa. Tsy mahaliana ve izany?
Ilay dinamika izay hitantsika dia miteraka noho ny tsy fitoviana eo amin'ny "anatiny" sy "ivelany". Ny tontolo manodidina antsika dia tsy lasa mavitrika fa be pitsiny. Mahita tsipiriany misimisy kokoa mivoatra amin'ny lafiny rehetra izahay, ary manakaiky ny sary lehibe. Zara raha hadinonay ny fihetsiketsehana izay mitondra mankany amin'ny dinamika lehibe, ary noho izany dia mandika izay lazain-dry zareo mihitsy hoe "fironana". Ary: Tianay ny Apokalipsy, izay no antony ametrahanay avy hatrany ny tontolo ho avy amin'ny fanavaozana ara-teknika: Ny fitaratra data izay mamela antsika hiaina ao anatin'ny tontolo virtoaly madio. Ny teknolojia RFID izay manodina avy hatrany ny felam-boninkazo dia lasa "vilany feno". Tsy misy dikany izany. Miaina tsy fantatra amin'ny tontolo teknolojia isika izao - anio ary bebe kokoa amin'ny ho avy. Fa ny olona sy ny herin'izy ireo no mampihatra ireo teknolojia. Ary noho izany dia hahatratra ny fetra tsy ho resy isika. Hahataka ny fetra ihany koa isika izay tsy azo hihoarana. Noho izany, ankehitriny dia mitombina ny firesahan'ny orinasa tsirairay momba ny fanavaozana ara-teknika. Mba ho sariaka ny teknolojia, hiatrehana izany, hahafantatra ny zava-misy nomerika. Tena ilaina izany. Fa avy eo indray, aza atao ambanin-javatra ny trangan-javatra ara-tsosialy. Firy ny fifanakalozan-dresaka niainantsika ka lasa toerana faran'izay tsara ny toerana ara-batana? Raha manao izany isika dia mahatsapa ny mifanohitra amin'izany: arakaraka ny anisantsika azy, ny maha-zava-dehibe sy ilaina indrindra dia lasa toerana ara-batana, fahatsapana, traikefa, fahatakarana ny manodidina sy ny vaovao. Izany haptic, tsy virtoaly. Amin'izao fotoana izao, ny fanambin'ny fiaraha-monina misy antsika ary ny toekarena dia mivoatra ara-panahy - fa tsy ara-teknika. "
INFO: revolisiona teknolojia: mety hitranga
Ny fiasan'ny fandikan-teny miaraka amin'ny alàlan'ny elektronika dia lasa zava-misy: efa saika hanova izao tontolo izao i Google: Raha tsy misy sakana ny fiteny maneran-tany dia mitombo hatrany ny tontolo, ary na dia manimba ny indostrian'ny fandikan-teny aza.
Fampisehoana & dokambarotra
Miseho, ary noho izany ny dokam-barotra dia afaka tsy ho ela tsy ela: eo amin'ny taxi, amin'ny billboard, amin'ny metro. Fa mbola mandeha lavitra kokoa: ny fanekena ny tarehy sy ny fifantohana akétika dia mahatonga ny fanatanterahana ny fomba tsirairay: "Andro tsara, Andriamatoa Paul! Misy telefaona finday vaovao ... "Ny mety ho fika manokana dia miainga amin'ny fampisehoana mifamadika, izay tokony ho nakarina amin'ny ho avy, ohatra.
E-fiara toy ny fitahirizana angovo
Fiara mandeha herinaratra tsy mandeha amin'ny mpamatsy angovo? Ny mpamokatra dia mila ny fitehirizana fitehirizana ny paompy hitaky ny "fivarotana". Satria ny fiara tsy miankina amin'ny iray monja dia eo amin'ny salan'isa iray isan'andro, dia afaka manao izany izy ireo - raha mipetaka amin'ny vatan-jiro, dia fitehirizana lehibe. Mety hiova ny fifamoivoizana iray manontolo.
Izany no fanantenana lehibe amin'ny indostrian'ny lamba lamba: ny teknolojia avo lenta dia misy ny fifangaroan'ny fibre nentim-paharazana sy mikrosetika, izay mandrefy sy mamakafaka ny asan'ny vatan'ny mpampita azy ary manolotra azy ireo amin'ny finday sy fitaovana hafa. Ny fiasana hafa dia azo atao: amin'ny fangatahana, ny lamba malefaka tampoka ho mafy sy henjana - tsara indrindra ho an'ny lay.
Previous article Fihenjana henjana, fitomboana vaovao - Tsanganana avy amin'i Mira Kolenc
Lahatsoratra manaraka Trano azo trandrahana: inona ny trano fonenana ara-tsosialy?